နည်းပြရာထူးက အထုတ်ခံရဖို့အတွက် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးချက်ထွက်လာပြီ
ရာထူးက အထုတ်ခံရဖို့ အလေးပေးမှုမှာ မော်ရင်ဟို Mourinho ထိပ်ဆုံးဖြစ်နေပြီ
1 Oct 2018 . 2:27 PM
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နည်းပြရာထူးက အထုတ်ခံရဖို့အတွက် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးချက်မှာ မန်ယူနည်းပြ မော်ရင်ဟို Mourinho က ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ အခြေအနေ ဆိုးရွားနေပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ၀က်စ်ဟမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ ၁၉၈၉-၉၀ နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး ရာသီအစ ရလဒ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလို အမှတ်ပေးဇယားမှာလည်း အဆင့်(၁၀)နေရာမှာ ရပ်တည်နေရတယ်။ မန်ယူအသင်းအနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြေးလမ်းပေါ်က ဆင်းခဲ့ရပြီလို့ ပြောလို့မရသေးပေမယ့် မော်ရင်ဟိုရဲ့ အနာဂတ်က စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီး ပရိသတ်တော်တော်များက မော်ရင်ဟို တတိမြောက်ရာသီ ကျိန်စာဆိုးက ပြန်လာပြန်ပြီလို့ ယူဆနေကြပါတယ်။
မော်ရင်ဟို နေရာကို ဇီဒန်း Zidane အစားဝင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်နေတဲ့အပြင် အခုလည်း မော်ရင်ဟိုဟာ နည်းပြရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံရဖို့အတွက် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးချက်မှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ အနာဂတ်က မကြာခင်အချိန်အတွင်း အဖြေထွက်လာဖို့လည်း ရှိနေပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ နောက်မှာတော့ ဆောက်သမ်တန်နည်းပြ မာ့ခ်ဟုခ်ျ Mark Hughes က ၆ လေး/ ၁ လေးနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး ဒီရာသီ နိုင်ပွဲမရသေးတဲ့ ကာဒစ်ဖ်အသင်း နည်းပြ၀ါနော့ခ် Warnock လည်း ထိပ်ဆုံး (၃)သင်းစာရင်းထဲ ပါနေတယ်။ အခုလောလောဆယ် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နည်းပြအပြောင်းအလဲ မရှိသေးလို့ ဘယ်သူ စပြီး ကံဆိုးမလဲဆိုတာတော့ . . .
ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံရဖို့အတွက် ဘွတ်ကီဒိုင်တွေရဲ့ အလေးပေးချက်များ
=19. Jurgen Klopp (Liverpool) – 100/1
18. Maurizio Sarri (Chelsea) – 66/1
17. Unai Emery (Arsenal) – 50/1
=14. Nuno (Wolverhampton Wanderers) – 40/1
=14. Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) – 40/1
=14. Eddie Howe (Bournemouth) – 40/1
=12. Roy Hodgson (Crystal Palace) – 33/1
=12. Javi Gracia (Watford) – 33/1
11. Marco Silva (Everton) – 28/1
=9. Slavisa Jokanovic (Fulham) – 20/1
=9. Chris Hughton (Brighton and Hove Albion) – 20/1
8. David Wagner (Huddersfield Town) – 16/1
=6. Sean Dyche (Burnley) – 14/1
=6. Manuel Pellegrini (West Ham United) – 14/1
5. Claude Puel (Leicester City) – 12/1
4. Rafa Benitez (Newcastle United) – 9/1
3. Neil Warnock (Cardiff City) – 13/2
2. Mark Hughes (Southampton) – 6/1
1. Jose Mourinho (Manchester United) – 1/1
ရာထူးက အထုတျခံရဖို့ အလေးပေးမှုမှာ မျောရငျဟို Mourinho ထိပျဆုံးဖွဈနပွေီ
ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နညျးပွရာထူးက အထုတျခံရဖို့အတှကျ ဘှတျကီဒိုငျတှရေဲ့ အလေးပေးခကျြမှာ မနျယူနညျးပွ မျောရငျဟို Mourinho က ရပေနျးအစားဆုံးဖွဈနပေါတယျ။ မနျယူအသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ အခွအေနေ ဆိုးရှားနပွေီး ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျက ဝကျဈဟမျးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ ၁၉၈၉-၉၀ နောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး ရာသီအစ ရလဒျပိုငျဆိုငျခဲ့သလို အမှတျပေးဇယားမှာလညျး အဆငျ့(၁၀)နရောမှာ ရပျတညျနရေတယျ။ မနျယူအသငျးအနနေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ခနျြပီယံလိဂျပွေးလမျးပျေါက ဆငျးခဲ့ရပွီလို့ ပွောလို့မရသေးပမေယျ့ မျောရငျဟိုရဲ့ အနာဂတျက စိုးရိမျစရာဖွဈနပွေီး ပရိသတျတျောတျောမြားက မျောရငျဟို တတိမွောကျရာသီ ကြိနျစာဆိုးက ပွနျလာပွနျပွီလို့ ယူဆနကွေပါတယျ။
မျောရငျဟို နရောကို ဇီဒနျး Zidane အစားဝငျမယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ ထှကျနတေဲ့အပွငျ အခုလညျး မျောရငျဟိုဟာ နညျးပွရာထူးက ထုတျပယျခံရဖို့အတှကျ ဘှတျကီဒိုငျတှရေဲ့ အလေးပေးခကျြမှာ ထိပျဆုံးရောကျနတောကွောငျ့ သူ့ရဲ့ အနာဂတျက မကွာခငျအခြိနျအတှငျး အဖွထှေကျလာဖို့လညျး ရှိနပေါတယျ။ မျောရငျဟိုရဲ့ နောကျမှာတော့ ဆောကျသမျတနျနညျးပွ မာ့ချဟုချြ Mark Hughes က ၆ လေး/ ၁ လေးနဲ့ ရပျတညျနပွေီး ဒီရာသီ နိုငျပှဲမရသေးတဲ့ ကာဒဈဖျအသငျး နညျးပွဝါနော့ချ Warnock လညျး ထိပျဆုံး (၃)သငျးစာရငျးထဲ ပါနတေယျ။ အခုလောလောဆယျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နညျးပွအပွောငျးအလဲ မရှိသေးလို့ ဘယျသူ စပွီး ကံဆိုးမလဲဆိုတာတော့ . . .
ရာထူးက ထုတျပယျခံရဖို့အတှကျ ဘှတျကီဒိုငျတှရေဲ့ အလေးပေးခကျြမြား